Indawo yokuhlala eNtabeni eValsesia ebekwe eBelvedere di Fobello (1200 m. A.s.l.), ilungele iintsapho, abadla umhlala-phantsi, abathandi bokuhamba; isiseko esihle kakhulu sokuhamba okude emahlathini okanye ezintabeni, ngokudibana ngokupheleleyo nendalo kwaye kude nengxolo yasezidolophini.
Amathuba okukhatshwa, ukuhamba ezintabeni okanye kwindlwana ebekwe kwidlelo lentaba malunga neeyure ezi-2, kunye ne-polenta yokuzikhethela.
Kukho iiflethi ezi-2 ezikhoyo:
I-APARTMENT n.1: I-Apartment enamanqanaba ama-2 anegumbi lokuhlala / ikhitshi, igumbi lokulala eli-1 elinebhedi / ibhedi, igumbi lesibini elineebhedi ezi-3 ezingatshatanga, igumbi lokuhlambela elinebhafu / ishawa kunye ne-terrace.
I-APARTMENT n.2: Ikhitshi, igumbi lokuhlala elinesofa ephindwe kabini, igumbi lokulala elinebhedi enye xa uceliwe, igumbi lokuhlambela elinebhafu / ishawari.
Omabini amagumbi aneebhalkhoni ezijonge emazantsi.
I-panoramic belvedere hamlet yaseFobello (indawo yokuzalwa yaseVincenzo Lancia, umseki womenzi wemoto owaziwayo) ifumaneka kwi-promontory, ilanga ukusuka ekuseni ukuya kusihlwa; ifikeleleka ngemoto ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-50 ukusuka kumdibaniso, nto leyo evumela abantwana ukuba badlale ngokukhululekileyo kwiindawo ezinengca.